/ Uwavula kanjani amafayela we-CHM ku-Linux | Kusuka kuLinux
I-Los I-Microsoft isiza amafayela ngena ku Ifomethi yokuphathelene ye-CHM. Ngeshwa, abanye "ubuhlakani" basebenzise le fomethi ukusabalalisa ama-ebook nezinye izinhlobo zokuqukethwe. Ngalesi sizathu, kwesinye isikhathi singazithola sibhekene nesidingo sokufuna buka lezi zinhlobo zamafayela. e Linux kukhona eziningana izinhlelo Ukuze senze kanjalo, sethula ezithandwa kakhulu.
Mhlawumbe inketho engcono kakhulu, uma kwenzeka iFirefox isiphequluli sakho sewebhu osithandayo, ukuzama i-CHMFox, isandiso sokubuka amafayela we-CHM ngqo kusuka kuFirefox.
I-Xchm iklayenti le-cross-platform elisekela zonke izinhlelo ze-UNIX (Linux, * BSD, Solaris), Mac OS X neWindows.
Ukufakwa ku-Ubuntu kanye nokuphuma kokunye:
sudo apt-get ukufaka xchm
I-Kchmviewer iklayenti lokubuka amafayela we-CHM eza ne-KDE ngokuzenzakalela. Akukaze kutholakale izibuyekezo isikhashana kepha kusebenza ngokuphelele.
sudo apt-get ukufaka ubalasi
Okular, isibukeli sedokhumenti esiza ngokuzenzakalela ku-KDE sifaka nokusekelwa kwamafayela we-CHM, kepha kulokhu kuyadingeka ukufaka imitapo yolwazi ye-libchm.
Ku-Ubuntu nakokuphuma kokunye:
sudo apt-get ukufaka libchm-bin
I-ChmSee isuselwa ku-CHMLIB futhi isebenzisa i-GTK + ukwenza kwayo. Ngoba isebenzisa injini yokunikezela nge-Gecko (yebo, efanayo naleyo esetshenziswa yiFirefox), iChmSee isekela i-HTML ne-CSS ngokuphelele.
sudo apt-get ukufaka chmsee
Ekugcineni, uma uyi-geek yangempela, ungavula ifayili le-CHM bese uzulazula amakhasi we-HTML ngesandla. Lokhu kungenzeka ngoba ifayela le-.chm liqukethe inkomba, ithebula lokuqukethwe, kanye nesethi yamakhasi e-HTML axhunyaniswe netafula, acindezelwe ukukhiqiza ifayela losizo.
Lokho kusho, ngikholwa ukuthi le fomethi, ngaphezu kokuba eyokugcina futhi ingasasebenzi (iMicrosoft uqobo ishiye ukusetshenziswa kwayo), ingashintshwa ngezinye izindlela ezisebenza ngokulingana nezisebenza ngokulingana (i-PDF, i-DJVU, njll.). Futhi, ungakhohlwa ukuthi Amafayili Osizo Ahlanganisiwe we-HTML angaqukatha amakhasi e-web anekhodi enonya, ngaleyo ndlela abeke usongo kwezokuphepha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » / Uwavula kanjani amafayela we-CHM ku-Linux
UCamilo Garcia kusho
Ngizoyikhumbula lapho ngihlangana ne-chm. Inothi elilodwa, kufanele uthi i-Debian kanye ne-derivatives hhayi i-ubuntu kanye ne-derivatives. 🙂
Phendula uCamilo Garcia
UBoss, uCamilo Garcia uqinisile, u-Apt noDeb bebesetshenziswa eDebian kusukela ngaphambi kokuzalwa kuka-Ubuntu
Siyabonga ngomnikelo! Halala!
Ungaziguqula kanjani izingqikithi ze-GDM